congress: Top Zimbabwe News - Page 3 - NewsHub
21-30 results from 1000 for query «congress»
February 15, 2018 4:38 PM Chamisa confirmed MDC acting president
The Movement for Democratic Change (MDC) National Council has appointed Nelson Chamisa (40) as the party’s acting president following the death of its founding leader, Morgan Tsvangirai. A former Prime Minister in the coalition government, Tsvangirai, 65, died in South Africa on Wednesday after a long battle with colon cancer. Tsvangirai’s death cast his Movement 71
January 24, 2018 3:08 AM Zanu-PF expels Moyo – Nehanda Radio
Former Bulawayo Provincial Affairs Minister Nomthandazo Eunice Moyo yesterday lost her parliamentary seat after Zanu-PF notified Parliament of her expulsion from the ruling party. Speaker of the National Assembly, Advocate Jacob Mudenda, notified the House that he had been informed by Zanu-PF that Ms Moyo was no longer a member of the party. “On the 22nd of January 92
December 16, 2017 9:41 AM 'Arrest Grace Mugabe, Kasukuwere and Jonathan Moyo'
Newly appointed ZANU PF Secretary for Women's Affairs Marbel Chinomona has implored president Emmerson Dambudzo Mnangagwa to prosecute the G40 leader Grace Mugabe together with her aids Saviour Kasukuwere and Jonathan Moyo who are in self imposed exile. Speaking at the ZANU PF at the ZANU PF extra ordinary congress in Harare on Friday (yesterday) Chinomona 675
December 16, 2017 7:35 AM Muchinguri to be new Vice President?
Even though president Emmerson Mnangagwa has delayed announcing his two vice presidents, social media on Friday was awash with reports that Oppah Muchinguri Kashiri had been appointed as the the new female vice president of Zimbabwe. The social media rumors started after someone shared what appeared to be Muchinguri-Kashiri's VP acceptance speech online 517
December 16, 2017 6:41 AM Minister Chikukwa booed at Zanu PF congress
Harare Metropolitan Province minister Miriam Chikukwa was booed during the Zanu PF congress in Harare yesterday with party members demanding her ouster. Chikukwa was saved from further embarrassment by party spokesperson Simon Khaya Moyo. Members demanded that she be fired alongside other G40 members after she was invited to welcome guests as the host province 438
December 12, 2017 5:32 AM Tsvangirai has done his part, should retire
Debate is now raging on whether MDC-T leader, Morgan Tsvangirai is helping the opposition case or now a curse. Without doubt, no political history of Zimbabwe can be complete without the mention of Tsvangirai's name. Rising from the Zimbabwe Congress of Trade Union to unite people around MDC, Tsvangirai indeed shook the political establishment. He helped 147
December 10, 2017 2:05 PM Minister Chikukwa, 3 bigwigs to be expelled from Zanu-PF
The Zanu PF Harare Province inter-district conference held in the capital has recommended for the expulsion of Minister of State for Harare Metropolitan Province Miriam Chikukwa and three other senior members from the party. The conference also resolved that President Emmerson Mnangagwa be endorsed as the revolutionary party's President and First Secretary 54
November 17, 2017 1:31 PM Mugabe not welcome to exile in SA, says DA
The Democratic Alliance (DA), South Africa's official opposition to the governing African National Congress (ANC) said it reject the prospect of the South African government granting Zimbabwean President, Robert Mugabe, to exile in South Africa. "We firmly reject the prospect of the South African government granting Zimbabwean President, Robert Mugabe 63
November 16, 2017 6:18 AM Zanu-PF defers elections following Chiwenga's military coup
Zanu-PF's Manicaland and Mashonaland West provincial executives yesterday developed cold feet and failed to hold the scheduled central committee elections, citing the tense political situation in the country. The party's Manicaland provincial secretary for administration Kenneth Saruchera said the elections had been rescheduled to another date. The central 33
November 2, 2017 4:03 AM Zimbabwe woman elected to top post
A LOCAL women’s rights activist, Rita Marque-Mbatha, has been appointed vice-president of International Alliance of Women (IAW), a global advocacy group that campaigns for the elimination of violence against women and children. Her election to the global advocacy group was confirmed early this week by AIW spokesperson, Lene Pind. “At the 37th congress 39